Afa-tsy ny roa na telo taona lasa izay, ny maha zava-dehibe ny fifandraisana amin’ny nonresident mpiara-miasa dia refesina amin’ny taona ny taratasy milanja tsara voatahiry valopy. Amin’izao fotoana izao, izany lalana izany ny mpivady ho sambatra toa ny fiverenana. Noho ny Fiarahana sy ny toerana, ny fifandraisana dia afaka miroso amin’ny ny toerana»fanomanana ho amin’ny fampakaram-bady»taorian’ny roa herinandro. Ny sakana dia tsy na-ponenana ny safidy. Ny zava-dehibe indrindra tsy roa mendrika ny tsirairay.
Ahoana no mifidy ny fanompoana Mampiaraka ny
Nahalala ny alalan ny Internet mahafinaritra sy mora. Na izany aza, tsarovy fa virtoaly ny fifandraisana dia mifandray amin’ny loza sasany. Ohatra, kanto macho (mafana babe) mety ho pimply tanora (ratsy tarehy matavy zazavavy miaraka amin’ny vera). Na hafa ny olona rehefa ela ny taratasy tampoka teo dia tonga ilay nandrasana hatry ny ela ny fihaonana eo amin’ny tena fiainana.
Ho mendri-pitokisana fikasana afaka manafina ny hosoka na swindler. Midika ve izany fa Mampiaraka an-tserasera tokony hilavo lefona.
Fotsiny isika, mila miomana.
Mba hiarovana tsara ny tenanao avy intruders, dia ampy hanaraka fitsipika vitsivitsy:
tsy nilaza na inona na inona ara-bola na ny mombamomba (pasipaoro tahirin-kevitra na ny carte de crédit);
mitandrema ny rohy isan-karazany izy ireo dia afaka ny ho mampidi-doza, na raha toa ka naniraka ny mpanohitra (afa-tsy avy amin’ny fandikana ny pejy tsy misy olona afa-bela amin’izany);
manendry daty voalohany amin’ny online namana ao amin’ny toerana ho an’ny daholobe, lazao ny namana izay handeha ianao, ka tandremo ny finday mora raisina;
aza misalasala tatitra ny ahiahy ny amin’ny fanohanana na ny fitantanana ny site (ny endriky ny amin’ny spam na mahery setra ny hafatra).
Noho izany, mitam-piadiana amin’ny fiarovana ny soso-kevitra, manomboka mifidy ny asa fanompoana ho an’ny tokan-tena. Ny mpitari-dalana.
Hamantarana ny zavatra ny kendrena mpanatrika ny asa fanompoana. Na mahafeno ny zavatra ilaina. Raha toa ianao mitady olona ao amin’ny sokajy, dia tsy ilaina ny manaiky ny fangatahana any amin’ny toerana amin’ny famoronana orinasa mpijery hatramin’ny taona.
Aoka hojerentsika ny fomba maro ny mpikambana eo an-toerana sy ny mpanao. Na izany aza, ny isa, ny mpampiasa dia tsy tsara mandrakariva. Ny fanontaniana mety very ao anatin’ny iray tapitrisa ny hafa.
Vakio reviews. Afaka hahita azy eo amin’ny namany sary. Fantaro ny momba:
inona no rivotra iainana Ankapobeny eo an-toerana; na mitaky vola ny vola;
firy ny spam sy ny hosoka ny kaonty;
misy tantara tena fifandraisana matotra taorian’ny fihaonana teo amin’ny loharanon-karena, sns.
Mba hisoratra anarana amin’ny Fiarahana mamorona vaovao mailbox. Ity dingana ity dia hiaro anao ao ny zava-nitranga ny tantara dia nanaiky lembenana. Ny mombamomba azy dia tsy milaza ny vaovao avy amin’ny sokajy»isan’andro avy. ny. aho tany amin’ny sekoly fianarana dihy haiady sakafo».
Malaza indrindra Mampiaraka toerana: ary dia niaina amim-pifaliana hatrany
Ny note dia mitovy amin’ny zavatra afaka mahita ao amin’ny Internet. Isika fizahana ny tolotra eny an-tsena an-tserasera Niaraka (eto, ny fomba, ny tena mpitarika). Tsy haka ny boky fikarohana matetika ao ny fikarohana na ny fandevilevin’ny anarana. Tsy tafiditra ao ny isan’ny mpampiasa (izany dia tsy fantatra firy ny mpikambana ao amin’ny tapitrisa»nalevina»ary ohatrinona ny»mihaza»ho an’ny fahafinaretana). Ny ampy no tena subjective. Fa izany dia mifototra amin’ny famerenana ny tena vahoaka (namana, mpiara-monina, mpiara-miasa, ny namana.) ary ny tena tantara tsara fiafara. Avy amin’ny angano izay»dia niaina amim-pifaliana hatrany».
«izay rehetra mahafinaritra»: isaky ny stewardess vadiny-mpanamory fiaramanidina.
Ny loharano mifantoka amin’ny fitadiavana ny vady ny asa, ary ny tombontsoam-bahoaka.
Azo antoka fa, isaky ny manana roa tantara mikasika ny birao misy tantaram-pitiavana. Ary ny antony tsara. Araka ny fianarana»ny fanomen’i Mpihaza», ny mpiasa, fara fahakeliny, indray mandeha nanana asa fifandraisana. Ankoatra izany, isaky ny fahadimy tantara miafara amin’ny fanambadiana. Noho izany, ny avy hatrany ny Hatsikana Eldar Ryazanov ny»Birao tantaram-pitiavana»dia lehibe momba ny antontan’isa fototra. Raha, na izany aza, sy ny namany sary»Fiarahana».
Fandalinana ny fanompoana ny»ny fanomen’i Mpihaza»dia nametraka fa ny ankamaroan’ny toeram-piasana misy tantaram-pitiavana mamela ny tenanao mpiasa:
Sehatry ny fiantohana (ny rehetra namaly ao amin’io faritra io)
An-tampony ny fitantanana
Ny fitrandrahana ny akora.
Ny asa fanompoana no mora ampiasaina. Rehetra ny asa fototra azo maimaim-poana. Afaka mifandray premium kaonty ho an’ny $ isam-bolana, izay manome ny sasany tombony:
haavony amin’ny endrika tao an-tampony;
fikarohana amin’ny fivavahana;
ny fahafahana hahita rehefa mpampiasa iray hafa no online fotoana farany;
Mahatsara: mety boky fikarohana, auto match mifototra amin’ny fanadihadiana lalina ny fanontaniana, ny endri-javatra ny ny maimaim-poana, ny ekipa foana interacts amin’ny mpitsidika.
Mpanohitra: nisy vao natao fotsiny ho an’ny mpiteny rosiana.
«Fiarahana»: tsy afaka mividy ny fitiavana, sy ny mahazatra mba
Nanambara toy ny toerana ho an’ny lehibe sy ny Mampiaraka ao Frantsa ho an’ny olona ao amin’ny taona sokajy. Efa misy sahady ny taona sy mirehareha tapitrisa ny mpikambana. Ny olona mihoatra noho ny vehivavy (oharina). Rehefa misoratra anarana dia tsy maintsy mameno ny fanontaniana, izay ny mpandraharaha tokony mandray anjara amin’ny mahomby fikarohana ny tapany faharoa. Premium kaonty dia tsy cheap $ isam-bolana. Izy mety tsy miresaka na mijery ny kaontin’ireo mpampiasa hafa. Mazava ho azy, io toe-javatra io dia mamaritra ny predominance ny ratsy fanehoan-kevitra momba ny harena.
Mahatsara: maro ny fanontaniana, amin’ny antsipiriany ara-tsaina fitsapana nandritra ny fisoratana anarana.
Mpanohitra: tsy misy buy premium kaonty toerana dia tsy misy ilàna azy, tsy afaka hihaona ihany ny olona avy any Frantsa.
Mampiaraka an-tserasera: ny Fiarahana amin’ny aterineto guide
Ny iraisam-toerana, izay efa mihoatra ny tapitrisa fanontaniana maneran-tany. Mety kandidà voafidy, indrindra indrindra ny fepetra ny toetra amam-panahy rehefa misoratra anarana dia tsy maintsy mameno ny antsipiriany ny maha-izy azy ny fitsapana izay toa fotsiny tsy misy farany. Na dia amin’ny pejy an-trano dia famantarana ny mpampiasa tanteraka ny fiarovana, amin’ny spam ny kaonty misy. Ankoatra ny fototra (izay dia saika tsy misy na iray aza), misy ihany koa ny handoa ny asa, fifandraisana izay hitentina — dolara isam-bolana. Reviews mifangaro, any Frantsa ny vohikala dia tsy tena malaza.
Mahatsara: maro ara-jeografika fandrakofana, maro ny fanontaniana.
Mpanohitra: hisoratra anarana haingana dia tsy miasa dia mila mameno be fanontaniana, izay handray ny fara-fahakeliny minitra; ny fifandraisana, ny fijerena ny mombamomba azy sy ny asa hafa tsy misy fandoavam-bola dia tsy misy.
«Planeta Fitiavana»: ny fitiavana sy ny dokam-barotra
Ny iray amin’ireo malaza indrindra Mampiaraka toerana any Frantsa, nandrakotra ihany koa ny mpanatrika ny akaiky any ivelany. Amin’ny taona nisiany, nisy tombanana tapitrisa eo ny fanontaniana. Ny fomba fisoratana anarana dia somary tsotra, fa raha tsy hividy kaonty karama (momba — dolara isam-bolana), ny varavarana lamba dia miseho tsindraindray manelingelina dokam-barotra, sy ny maro hafa vaovao ny fifandraisana isan-andro dia ho voafetra ihany. Mba hanamarinana ny fanontaniana ao amin’ny dingana voalohany ny fisoratana anarana amin’ny nangataka ny finday isa.
Mahatsara: maro ny mpampiasa, maro ara-jeografika-baovao, maimaim-poana ny fifandraisana amin’ny mpampiasa sasany.
Mpanohitra: tsy tena believable ny famerenana amin’ny ny toerana (olona efa manambady ny olona ny nofy amin’ny herinandro), fanehoan-kevitra ratsy nesorina.
«Lehibe mahafinaritra»: monina eny amin’ny rihana fahadimy.
Iraisam-pirenena online Dating site, amin’ny mpanatrika mihoatra ny tapitrisa. Fifantenana ny kandidà dia tena tsy manan-kery, raha tsy misy fanontaniana: raha ny marina, ny»Lehibe ny Fiarahana»dia tambajotra sosialy, izay mamaritra ny kely indrindra momba ny mpampiasa. Fanamarihana momba ny tranonkala no tsy mazava, izany no mahaliana ity dia ho nahay fiteny vahiny.
Mahatsara: fahafahana hahita izay no manaraka; maneran-tany tatitra maimaim-poana ny fifandraisana.
Mpanohitra: matchmaking mitranga amin’ny loza; misy famerenana izany ny mpitsidika mifandray amin’ny milina, tsy tena olona.
Ny manam-pahaizana»tena Matotra ny Fiarahana amin’ny»mba hanazava ny laza tsy mitsaha-mitombo ny tolotra ety anaty aterineto ho an’ny Fiarahana mercantilism»dia mora kokoa ny safidy ny hijery.»Ao amin’ny fisotroana kafe na cinema, ianao dia efa misy ny olona. Raha ivelan’ny aterineto, ny faritra miasa ny mifamadika amin’izany dia mandeha any amin’ny sarimihetsika, manantena mahomby olom-pantatra.
Maimaim-POANA: ny tanora sy ny maimaim-poana
Loharanon-karena ity dia noforonina vao haingana, ao amin’ny. Raha izany dia eo amin’ny, tapitrisa ny mombamomba sy ny fahafaha-miasa mahantra: ny sasany faritra ny toerana dia ao amin’ny fampandrosoana sy ny handeha ho azy ireo. Reviews firy, ka sarotra mba ho azo tsapain-tànana ny famaranana.
Mahatsara: amin’ny maso no nanosika ny hiditra ny finday isa ho an’ny fitandrona ny; ny misahana ny zaza tsy ampy taona ny tombontsoa toy izany, ny lalao, ny sisa rehetra dia maimaim-poana.
Mpanohitra: mahantra miasa, vitsy ny mpampiasa.
«Toerana ny fifandraisana sy ny Fiarahana (Mampiaraka lehibe fifandraisana»): na inona na inona manokana
«Tranonkala niady hevitra sy ny Fiarahana»dia iray amin’ireo voalohany Mampiaraka toerana ao amin’ny Internet, dia efa mihoatra ny taona. Amin’izao fotoana dia mandrakotra ny firenena ary maherin’ny tapitrisa ny isan’ny mpijery. Ny famerenana an-tserasera dia ny ankamaroany ratsy: misy be dia be ny spam sy ny fisolokiana, mitady ny mahafinaritra indrindra ho an’ny mihelina fihaonana kosa noho ny fifandraisana lehibe, matetika ny mpampiasa ao amin’ny tatitra voalohany dia hoe tsy mandefa sary akaiky afa-po. Ny tsena iraisam-pirenena ny mizara navoaka eo ambany ny marika»Mampiaraka fifandraisana lehibe»izany, saingy, indrisy, ny maha-marefo ny»olom-pantatra Rehetra»amin ny anaran fiovana dia tsy nanjavona.
Mahatsara: maro ara-jeografika fandrakofana sy ny maro ny fanontaniana.
Mpanohitra: be dia be implausible hevitra (momba yachts, Paradisa Nosy, sns.), mahantra ny fahafaha-miasa tsy VIP tantara be dia be ny soso-kevitra ny fifandraisana akaiky, ny fisian’ny milina, mahantra mpanjifa sy ny mahantra ny fitantanana, hanala ny ratsy famerenana.
Ny fitiavana: ho an’ny mpankafy ny anarana
Izany rosiana manana toerana nisy azy nandritra ny taona, pototry ny mombamomba fotsiny ny tapitrisa. Ny tena mpihaino olona avy amin’ny. Ny VIP kaonty dia manome anao, raha tsorina dia, dia miasa ny voromby. Ny famoahana ny sary ao an-tampon’ny $. Fanamarihana mahakasika ny loharano mifangaro.
Mahatsara: maimaim-poana ny fifandraisana sy ny fisoratana anarana; misy fiaraha-monina izay mampakatra ny sary sy ny lahatsoratra: noho izany dia tsy afaka afa-tsy ny firesahana amin’ny hafatra manokana; afaka hanakana ny mpampiasa.
Mpanohitra: tsy misy fisoratana anarana nametraka ny nomeraon-telefaonina, ary izany dia ny fisian’ny hosoka ny kaonty; ny fisoratana anarana dia tsy ny an-tsipiriany; be dia be tsy mety mpampiasa.
«Ny traikefa eo akaikin’ny»: malaza, fa tsy matotra
Ny iray amin’ireo malaza indrindra fampiharana finday ho an’ny Fiarahana.
Araka ny fanadihadiana, finday Mampiaraka fampiharana nametraka ny fitaovana tapitrisa ny olona eto amin’izao tontolo izao. Ireo, tapitrisa eo ny»Fiarahana manodidina.»
Eto dia afaka mifidy toy ny fikarohana ho an’ny lehibe sy ny fifandraisana sy ny fivoriana tsy adidy. Ny mpanatrika, ny ankamaroany dia latsaky ny taona. Mihoatra noho ny antsasaky ny mpampiasa latsaky ny taona. Ny tena mampiavaka ny asa fanompoana hitadiavana olona mba hijery akaiky. Ny famerenana dia ny ankamaroany tsara, fa misy fitarainana momba ny fisian’ny bots.
Mahatsara: tsy hanahirana, namana interface tsara, fanontaniana tsotra, ny lafiny manan-danja, — karazany ny mpampiasa manerana izao tontolo izao, ny fahafahana hisafidy ny geo-tag.
Mpanohitra: ny fampiharana matetika freezes sy nianjera vitsy ny olona mitady ny fifandraisana matotra.
Mba hahitana ny tena mahaliana ny olona, na dia eo ankavanana Mampiaraka toerana dia tsy mora. Dia fahazoan-dalana tsy mandoa ny saina ho amin’ny tanora»akany»toerana. Amin’ny fikatsahana hahazoana mpihaino, dia nandoa ny saina bebe kokoa ny asa fanompoana sy ny fiarovana. Ny tery mifantoka, ohatra, ny matihanina, manala mpankafy ny zavatra»ary nafana». Mirary soa ao amin’ny fikarohana vady
← Hahita ny efi-trano
Toerana mifampiresaka tsy misy fisoratana anarana →